KYAT88.com သည် အပေါင်းအသင်းများ တာဝန်ရှိခြင်းနဲ့ သုံးစွဲသူများကို ဂရုပြုကြည့်ရှုခြင်း မူဝါဒအတိုင်း လောင်းခြင်း တာဝန်ယူမှုများကို ကြေညာရန် ကန့်သတ်မှုဖြစ်သည်။ လောင်းကစားခြင်းပိုင်း ပြဿနာနှင့် နှီးနွယ်မှုသော ငွေကြေး အန္တရာယ်များနှင့် လူမှုရေးပိုင်း အပြည့်အဝ သိရှိချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုက်တ်တွင် သင်ရဲ့လောင်းခြင်း အတွေ့အကြုံနှင့် သင်ပျော်ရွှင်ဖို့ သေချာရန် ဒါသည် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
အကူအညီများ သင်လိုအပ်ပါက, ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၄/၇ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ အကူအညီဆီ ဆက်သွယ်ပါ။
လောင်းကစားခြင်းကို အပျင်းပြေပျော်ရွှင်စေသောအရာအဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်။ ဝင်ငွေ ဖြစ်စေသည့် အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါ။ လူဦးရေအများစုသည် လောင်းကစားခြင်းကို အားသစ်ရွှင်လန်းစေခြင်းအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပြီး သူတို့တတ်နိုင်သော စွန့်စားမှုလောက်သာ အသုံးချနိုင်သည်, တစ်ချို့တွေအတွက် ဒါဟာ ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ သင့်၏ လောင်းကစားမှုအပြုအမှု ကို ထိန်းသိမ်းရန် အောက်ပါအချက်များကို အစဉ်အမြဲစဉ်းစားရန် သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပေးလိုက်ပါသည်။
* လောင်းကစားခြင်းကို ငွေရခြင်းရဲ့စစ်မှန်သော နည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ အားလပ်ချိန်အတွက် ပုံစံတစ်မျိုးအဖြစ် လျော့ပါးခြင်းနှင့် တာဝန်ယူခြင်းထဲမှာ ဖြစ်ရပါမည်။
* ဆုံးရှုံးမှုများ နောက်လိုက်ရန် ပယ်ဖျက်ခြင်း - အခြားနေ့များ ရှိပါသေးသည်။
* ဆုံးရှုံးမှုများကို သင်ကာကွယ်နိုင်သည့်အခါမှသာ လောင်းပါ။
* အချိန်ကို ဆက်လက်ခြေရာခံပြီး သင်သုံးစွဲမည့် ငွေပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။
သင့်ရဲ့လောင်းကစားခြင်းနဲ့ သင့်တွင် ရှိနိုင်သော သောကများနှင့် ပက်သက်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို သင်ပြောဖို့ လိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၄/၇ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ အကူအညီဆီ ဆက်သွယ်ပါ။
လောင်းကစားခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး သင့်ဘဝ သို့မဟုတ် တစ်ခြားသူအပေါ်တွင် ပျက်စီးစေသော အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်ဟု သင်ပူပန်ပါက အောက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများက သင့်ကို ကူညီကာ အဖြေထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
• လောင်းကစားခြင်းအတွက် အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းပျက်ကွက်ခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသလား?
• လောင်းကစားခြင်းသည် သင့်အတွက် ပျင်းရိခြင်း သို့မဟုတ် ဘဝတွင် မပျော်ရွှင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သင်ခံစားမိပါသလား?
• သင့်ငွေကြေးအားလုံးကို သင်လောင်းပါက စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများ သင်ခံစားမိမှာလား? ထွက်ပေါက်အနေဖြင့်သာ အခြားလောင်းသစားအပိုင်း ဖြစ်မှာလား?
• သင့်၏ အစားစရိတ် သို့မဟုတ် လိုင်းကားစရိတ်အပါအဝင်, သင့်ငွေကြေးအားလုံးကို လောင်းခြင်း သင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသလား?
• လောင်းကစားခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးသော ငွေကြေးနှင့် အချိန်ပမာဏကို သင်လွတ်လပ်စွာ ဝန်ခံနိုင်ပါသလား?
• လောင်းကစားအလွန်အကျွံလုပ်ခြင်းအတွက် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းများ သင်ခံခဲ့ဖူးပါသလား?
• လောင်းကစားငွေကြေးလိုအပ်လာပါက အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ခိုးခြင်း, လိမ်ခြင်း, ရောင်းခြင်းများ သင်လုပ်မှာလား?
• လောင်းကစားခြင်းအတွက် ငွေကြေးဖယ်ထားခြင်း သင်ထားပါသလား? ကွဲပြားသောနည်းလမ်းတွင် သင်သုံးစွဲမှာလား?
• အရည်အသွေးအချိန်ရှိရန် သင့်မိသားစု, မိတ်ဆွေများဆီသို့ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် လောင်းကစားခြင်းကို သင်တင်ပြမည်လား?
• တစ်စုံတစ်ခုကို သင့်ဖို့ သင်ဖြစ်လာသည့်အခါ သင့်ဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကို ပြန်လည်ကုစားရန် တိုက်တွန်းမှုတစ်ခုဟု သင်ခံစားမိပါသလား?
• နောက်ထပ် လောင်းကစားလုပ်ရန် ဆန္ဒများနဲ့ ငြင်းခုံခြင်းများ, စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းများ, စိတ်ပျက်ခြင်းများနှင့် သင်တုံပြန်ပါသလား?
• လောင်းကစားသည် သင့်ကို စိတ်ဓါတ်ကျအောင် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေအောင် တွန်းပို့ပါသလား?
အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများနှင့် ကောင်းမွန်သောအဖြေများ သင်ရပါလိမ့်မည်။ ပြင်းထန်သော လောင်းကစားပြဿနာများ သင့်မှာရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဲ့ဒီလိုဆိုပါက အကူအညီနှင့် အကြံဥာဏ်အတွက် အထူး ဆက်သွယ်ရန် သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အမည်မသိလောင်းကစားသမားများသည် သူတို့ရဲ့လောင်းကစားပြဿနာနှင့် ပက်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်နှင့် အခြား ဆန္ဒမထိန်းနိုင်သော လောင်းကစားသမားများ အလားတူ လုပ်ဖို့ ကူညီရန် အတူတူ လက်တွဲခဲ့ကြသော မိန်းမများနှင့် ယောင်္ကျားများအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များ ရှိကြပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်မသိလောင်းကစားသမားများ အကျိုးဆောင် ဆိုက်တ်သည် www.gamblersanonymous.org.uk မှာ ဖြစ်ပါသည်။
လောင်းကစားခြင်းခြင်းဖြင့် အကျိုးယုတ်စေသော ထိခိုက်မှုများအတွက် အကူအညီနှင့် ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်မှု ကို လောင်းကစားရောဂါကုထုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
လောင်းကစားလုပ်သည့် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် မည်သူမဆို တရားမဝင်ပေ။
KYAT88.com သည် သုံးစွဲသူများဆီမှ အသက်အရွယ် သက်သေပြရန် တောင်းဆိုမှုကို ချွင်းချက်ထားပြီး မည်သည့်အကောင့်ကိုမဆို ဖော်ပြသည်အထိ စစ်ဆေးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးစွဲသူများကို အီလက်ထရောနစ် အသက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ စစ်ဆေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူတစ်ဦးသည် အသက်(၁၈)နှစ် သို့မဟုတ် ကျော်လွန်သည်ဟု ဟုတ်မှန်ကြောင်း စစ်ဆေးမှုများသည် မတတ်သာနိုင်ပါက Kyat88.com သည် အသက်အရွယ် သက်သေပြရန် တောင်းဆိုမှုကို ချွင်းချက်ထားမည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်သားပါ : ဆိုဒ်တွင် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် မည်သူမဆို သုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရှိပါက အနိုင်ရခဲ့သည်များကို ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းများ ရှိမည်။ သင့်လျော်သော သြဇာရှိသူများကို အစီရင်ခံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပါရမီအားလုံးသည် အရွယ်ရောက်သောသူများအတွက်သာ ပုံစံထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ICRA(အင်တာနက် အငြင်းပွားမှု သတ်မှတ်ခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့) သည် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ စစ်ဆေးခြင်းကို ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် လောင်းရန် တရားဝင်အသက်အောက် မိသားစုဝင်နှင့် မိတ်ဆွေများနှင့် သင့်ကွန်ပျူတာကို သင်ဝေမျှပါက ကျေးဇူးပြုပြီး နက်နန်နီနှင့် ဆိုက်ဘာပက်ထရိုကဲ့သို့ မိဘနှင့်ဆိုင်သော စစ်ဆေးခြင်း ဖြေရှင်းနည်းများကို ဆင်ခြင်ပါ။